Amagama ama-Husky angama-500 +: Uhlu Oluphelele Kunazo Zonke Ozoluthola - Izinhlobo
Uvele weza neHusky yakho yaseSiberia ekhaya. Wenze ucwaningo lwakho, wathola umfuyi omuhle noma otakulayo, futhi wenza nokutshala imali impilo yakho yonke.
Kepha manje kuza ingxenye enzima: Uzoyibiza ngani indlwana yakho entsha ?
Ukukhetha Amagama kaHusky akudingeki uzizwe ungaphezu kwamandla. Umhlahlandlela wethu uzokusiza ukuthi unqume ukuthi iliphi igama elihle le-pup yakho.
Yini igama elihle le-Husky?
Yini esegameni? AmaHusky adumile anama-monikers abambekayo
Amagama amahle kakhulu enja kaHusky
Kufanele ngiqambe ini ngokuthi uHusky wami?
Ngaphambi kokuchofoza u- 'engeza enqoleni' ku-Amazon ngaleyo khola epholile noma umaki we-Husky yakho, kufanele uqiniseke ukuthi yiliphi igama ongalibeka kuyo.
Futhi uma kukhulunywa ngokuqamba uHusky wakho omusha, iseluleko esihle kakhulu esingakunika sona ukuthi ukhethe okuthile imfushane futhi ingeyokuqala .
Isilwane sakho sasekhaya sizoba nenkinga yokukhumbula igama laso uma uhamba isikhathi eside Igama laseSiberia Husky . Zicabange ubiza u- “Chancellor Good Boy” noma “Sir Sir Fluffykins.” Umngane wakho woboya uzokukhipha ngohlamvu lwesibili.
Uma ukhetha igama elijwayelekile, ubeka engozini impendulo yakho kumnikazi ngamunye omemeza uFluffy noma uSpoti. Kufanele futhi ucabange ngawo wonke lawo maFluffies namachashaza agijimela kuwo wena.
Njengoba sonke siphupha ukunqotshwa yimidlwane ethandekayo, leyo adventure kungenzeka iguge ngokushesha.
Gwema noma yimuphi umdlalo we-doggie ngokunikeza i-Husky yakho yaseSiberia igama elilula kodwa elehlukile . Okusho okuthile kini nobabili nomfundi wakho.
Ngenhlanhla yakho, ungathola ugqozi emithonjeni eminingana.
Okwakho USiberian Husky’s ubumnene, ukubukeka, kanye nama-antics ahlekisayo wonke amaphuzu okuqala amahle kakhulu. Ungabheka kumaHuskies awaziwayo ngemibono yamagama, futhi.
Kukhona amaHusky adumile anamagama ahlasela ibhalansi phakathi kokufushane nokuhehayo. Amagama abo futhi eza nomoya wokwahlukanisa – ophelele uHusky ozethembayo.
Ungahlala uqamba i-fido yakho ngemuva kwendumezulu yaseSiberia Huskies efana Mhlophe , Ukuhamba , noma Mukluk . Ngabe uncamela ukuthatha i-cue kusuka kumathanga anamuhla athonya abantu?
UBrown , I-Glacier , IGala , futhi U-Anuko ngamanye amaHuskies akhuphuka aduma ku-Instagram.
Ungase uzwe mayelana IGohan , futhi. Ungu-Husky YouTuber (yup, Huskies angaba yi-YouTubers!), Waziwa kakhulu ngamavidiyo akhe e-ASMR futhi uzihlalela echibini.
Vele, ungathatha umkhondo kusuka kumaHuskies esikrinini sesiliva:
UGus kusuka Intando Yensimbi
Udizili, Mack, Sniff, Yodel, Scooper, amaDuchess, futhi Idimoni kusuka Izinja zeqhwa
UMax, uMaya, uTruman, uDewey, uMfushane , futhi UJack omdala kusuka Ngezansi okuyisishiyagalombili
AbakwaSiberian Huskies bantshontsha obala obukhombisa ama-direwolves omndeni wakwaStark Umdlalo wema-Throne , futhi. Kuyafaneleka kuphela ukuthi uHusky wakho abe negama elifana nalo Umoya Ompunga noma Nymeria .
Kunenqwaba yamaHuskies enza amagagasi eHollywood ngemuva kwezigcawu, futhi. Iningi losaziwayo abaku-A babiza ama-Huskies njengabangane babo baphakade, njengala ma-duos anezinkanyezi:
ukusa kanye no-Ashlan Gorse
Amabhakede noQuincy Poindexter
UFloyd noMiley Cyrus
Dallas noDanica Sue Patrick
I-Kona noNick Lachey
UWaldo picasso noJoe Jonas (kulungile, lena yinde kancane, kodwa iyathandeka)
Njengokungathi lokho akulona ugqozi olwanele kuwe, sinamagama amaHusky aphawuleka kakhulu esitolo. Qhubeka ufunde!
Uma kukhulunywa ngakho, igama elihle kakhulu le-Husky lenja yakho ukuthi iyiphi oyithandayo kakhulu. Nazi Ama-519 wokuhamba phambili Amagama kaHusky phandle lapho. Omunye walaba nakanjani uyoba onqobayo!
Amagama ama-Cute Husky
AbakwaSiberia Huskies bayathandeka, noma sebemdala. Lolu hlobo olungaphelelwa isikhathi lunayo izimfanelo nezimpawu zomzimba ezigqamile kodwa ezithandekayo , ngakho-ke kungani ungabaniki igama elizoqhathanisa?
Amagama ahlekisayo kaHusky
Mhlawumbe 'okuhle' akuyona ngempela i-jam yakho. Mhlawumbe igama lelo uthepha ku- USuskyan Husky ’Uhlangothi olunenhlekelele is more up your alley. Faka izinongo ngegama elihlekisayo likaHusky esikhundleni salokho!
Yimaphi amagama abesifazane aholayo kaHusky?
Kungaba lula ukubheka amagama ahlukaniswe ngokobulili. Ake siqale ukukhethwa okuphezulu kwamantombazane !
Okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhanyayo
UNiki / Nikki
USonny / libalele
IViktoria / iVictoria
Yimaphi amagama aphezulu abesilisa bakaHusky?
Asikwazi ukukhohlwa ngabafana. Nawa amanye amagama e-Husky athandwa kakhulu endoda (canine) empilweni yakho.
IBanshey / iBanshee
ICammo / Camo
UViktor / uVictor
Amagama aseSiberia Husky asuselwa kumbala
Ngaphezu kokuthandeka, amaHuskies eza ngemibala eminingi yengubo nemibala.
Ngamehlo abo ansundu naluhlaza okwesibhakabhaka noboya obucwathile, igama eliphelele lingahle livele kuzici zabo zomzimba.
Uma une nsundu Husky, zama lokhu:
Nawa amagama ambalwa amahle we okumhlophe Ama-Huskies:
Futhi inetha AbakwaSiberian Huskies bazozizwa njengenja enhle kunazo zonke ebhokisini ngelinye lamagama:
Buyela ezimpandeni zabo: Amagama kaHusky lapho avela khona
Ama-Huskies aseSiberia ayizinja zasendulo ezivela eSiberia. Abantu baseChukchi, abazala okhokho abaqondile bakaHusky, bakhuluma ulimi olubizwa ngokuthi isiChukchi noma isiChukot.
Kungani ungadwebi inja yakho entsha kulolu limi lwendabuko?
U-Aanaq - umama
I-Altana - igolide
Ayaan - uhambo
Ayiina - unkulunkulu
Belek - isipho
Chamuk - ukhozi
UDashinima - inhlanhla enhle
Eshi - ukuhlakanipha
UNatena - kulindeleke
Nyurgun - isithwathwa
UTatuk - ekuseni
Umky - ibhere elimhlophe
Amagama kaHusky aphefumulelwe ngemvelo
Lezi zinja ezihlonyiwe zinezibopho eziqinile kuzo zombili i-tundra yaseSiberia kanye nehlane lase-Alaska. Cabanga ukubanika igama elenza imizwa yokuncibilika eqhweni naseqhweni. Kuyafaneleka kuphela!
Amagama kaBadass amaHuskies anzima kakhulu
Kulungile, awu, “kunzima” no “Husky” kungahle kungahambi kahle. Bonke abathandi bezinja bakaHusky bayazi ukuthi lawa ma-canine angaphambi kwesikhathi ayizisofties ezinkulu kakhulu emhlabeni.
Kepha bona kubonakala zinzima, futhi zingabekezelela amazinga okushisa aphansi njengokufika ku -75 ° F (-59 ° C). Singasho ukuthi kukodwa i-badass enhle.
Amagama ama-Inuit Huskyan Husky
Uma amagama ethu asuselwa endalweni- kanye nakwindawo ngokuma komhlaba engakulungele, ikhona enye indlela ongayihlonipha ngayo indawo kaHusky emlandweni wase-Alaskan. Zama eyodwa yalezi I-Inuit amagama esikhundleni salokho.
U-Akiak - unesibindi
U-Amak - umdlwane odlalayo (uchaza uHusky kahle, awucabangi?)
Atka - inkosi
I-Chinook - umoya ofudumele
Eska - umfula
UKaskae - induna
Miki - mncane
IMiska - ibhere elincane
UNanook / Nanuk - ibhere le-polar
UNeko - owesifazane
Yini - ingungumbane
Qana - iqhwa eliwayo
Sakari - limnandi
Iseshini - iqhwa
Shila - ilangabi
Usuku - iqhwa
USilla - unkulunkulu wezulu
Thanda - ngokushesha
Takaani - impisi
Tanana - amagquma
Tikaani - impisi
Tonrar - uSathane
Uki - osindile
Ulva - impisi
Yura - muhle
Ngamagama angaphezu kuka-500 kuhlu lwethu, uqinisekile ukuthi uthole igama elifanele likaHusky wakho.
Ukuqamba inja njengokutholwa kuyinselele ngokwanele, kepha yini enye ngama-canine we-wolfy afana ne-Huskies ne Malamute , kwesokudla? Konke esingakwenza ukusiza ukunciphisa izinqumo zakho.
Cabanga ngobuntu be-pup yakho, ukubukeka, nomlando njengenja ethembekile yesihlibhi. Ungahlala ubheka kumaHuskies adumile noma usebenzise amahlaya athile egameni likaHusky wakho, futhi.
Ngakho-ke, kuzoba yini? Singathanda ukuzwa igama lakho elisha likaHusky kumazwana!
Ngabe uCorris uyachitha? Imininingwane Eyisisekelo Okufanele Uyazi
ilebhu ephuzi nokuhlanganiswa kwe-retriever yegolide
inja yami ilokhu ibamba umlomo kodwa akuphumi lutho
inja yezinkomo zase-australia ukuxubana kwelebhu ephuzi
ukuxubana okugcwele okugcwele kwesibhakela
i-golden retriever german shephard mix